चर्चित र विवादित दसैं गीत, जुन बज्‍नासाथ रुन्छ स्रष्टाको मन- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
रचनाकार भन्छन् : रोयल्टी पाइनँ
आश्विन २१, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — 'वर्ष र दिनको रमाइलो चाड गाउँघरमा आइपुग्यो, नेपालीजनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो...' 'मुगलान' फिल्मको यो गीत बज्न थालेपछि धेरैलाई दसैं आएको आभास हुन्छ । दसैंमा बज्ने धेरै गीतहरुमध्ये यो अग्रपंक्तिमै पर्छ । त्यसैले पनि दसैंमा यो गीत नसुन्ने कमै हुन्छन् । दसैंसँगै यो गीतले पनि दर्शकलाई छुट्टै उमंग दिन्छ । उत्साह थपिदिन्छ ।
तर, आफूलाई यो गीतको रचनाकार दाबी गर्ने लोकनाथ सापकोटालाई भने गीत बजेको सुन्नासाथ मन दुख्छ । यो गीत सुन्नै नपरोस् भन्ने लाग्छ उनलाई । 'हरेक दसैंमा यो गीत बज्छ । तर यो गीत सुन्दा मलाई धेरै दु:ख लाग्छ । जब-जब यो गीत बज्छ मलाई भित्रैदेखि रुन मन लाग्छ । त्यो गीतले मलाई धेरै मारमा पारेको छ । मलाई यो गीत नबजाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,' रचनाकार लोकनाथ भावुक सुनिए ।
खासमा संगीत क्षेत्रमा बामे सर्दै गर्दा उनले यो गीत रेकर्ड गराएको दाबी गर्छन् । ०५७/५८ तिरै रेकर्ड गरिएको यस गीतलाई रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रशारण पोखराबाट बजाएका पनि थिए । गीतमा तेजेन्द्र गुरुङ, कृष्ण परियार र रचानाकार लोकनाथकै स्वर थियो । गीतमा उनकै संगीत थियो । त्यतिबेला लोकनाथ पोखरा क्याम्पस पढ्थे ।
०५८/५९ तिर लोकनाथ बिन्दबासिनी चलचित्र मन्दिरमा लेखापालको काम गर्थे । त्यही क्रममा 'पाहुना' फिल्मको सुटिङका लागि पोखरामा आएका निर्देशक शिव रेग्मीसँग उनको भेट भयो । उनले शिवलाई यो गीत सुनाए । शिवले फिल्ममा गीत राख्ने कुरा गरेपछि लोकनाथ उत्साहित भए । निर्देशक रेग्मीले उनलाई फिल्मको परिवेश अनुसार गीतमा केही शब्दहरु थपघट गर्न लगाए । उनका अनुसार रेग्मीले 'कुनै घरमा दसैं राम्रोसँग मनाइन्छ, कुनै घर पैसा हुँदैन, दु:ख हुन्छ' भन्ने सन्दर्भ जोड्न लगाएका थिए । उनले त्यसै गरिदिए । अनि मेलोडी र शब्द लेखेर दिए । त्यसपछि बम्बईमा गीतको रेकर्डिङ भयो, उदित नारायण झा र दीपा झाको आवाजमा ।
२०६० मा फिल्म प्रदर्शनमा आयो । 'दसैं आयो'बोलको यो गीत दर्शकको मुखैमा झुण्डियो । अत्याधीकले गीतलाई मन पराए । तर फिल्ममा आफ्नो नाम नदेखेपछि लोकनाथ छटपटिए । न रचनामा न त संगीतमा, कतै नाम राखिएको भेटेनन् । उनले निर्देशक रेग्मीलाई आफ्नो नाम फिल्ममा नरहेको जानकारी गराएपछि रचनामा उनको नाम राखेर गीत बजारमा पठाइयो । निर्देशक कुमार बस्नेत, नारायण रायमाझीको उपस्थितिमा निर्देशक रेग्मीसँग सम्झौता भएपछि उनको नाम राखिएको लोकनाथ दाबी गर्छन् । संगीतमा आफ्नो नाम नरहेकाले यो गीत बज्नथालेसँगै आफ्नो मन दुख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
'पछिल्लो क्रममा सरेश अधिकारीले गीतमा आफ्नो संगीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँ रोयल्टी संकलन समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म मैले त्यो गीतबाट रोयल्टी पाएको छैन । न संगीतमा मेरो नामै छ,'आक्रोशित हुँदै उनले भने, 'पहुँचमा भएको व्यक्तिले स्रष्टालाई यसरी मार्ने हो भने कला जगत कसरी माथि उठ्न सक्छ र ? यो गीतको संगीत मेरै हो । सुरेश अधिकारीले एरेन्ज मात्र गर्नुभएको हो । सुरेशजीसँग कुरा गर्दा 'मैले ट्र्याक बनाएको हो त्यसमा तिम्रो संगीत नभनिदेऊ न' भन्नुहुन्छ । पहुँचमा जो छ उसैको मात्रै सुनुवाई हुन्छ ।'
पछिल्लो क्रममा बूढासुब्बाले लोकनाथकै रचना र संगीत भनेर गीत सार्वजनिक गरेपछि अधिकारीले आफ्नो नाम राख्न लगाएको लोकनाथको दाबी छ । 'सुरेश अधिकारीले झुट्टा भ्रम फेलाउँदै आफैंले संगीत भरेको सत्यता खडा गर्न चाहनुभएको छ । मैले त्यो गीतको अधिकार नपाउँला ठीक छ । तर भोलिको पुस्ताका स्रष्टा मारमा पर्नुहुन्न । यस्तै कुराले गीत/संगीतको क्षेत्रबाट मलाई विरक्त लागेको छ । यस्तो अनुभव कुनै कलाकार गर्नु नपरोस्,' उनी भन्छन्, 'रेडियो नेपालमा मेरो र साथीहरुको आवाजमा गीत रेकर्ड गरेको प्रमाण छ मसँग ।'
'अनि गजलकार भएँ म', 'म तिम्रै राजेश हमाल, म तिम्रै निरुता सिंह', 'झ्याईं पारौं निरुता सिंह'लगायतका सय भन्दा बढी गीतका रचनाकार हुन् लोकनाथ । 'दसैं आयो' बोलको गीतलाई उनले दसैंको माहोलमा लेखेको बताउँछन् । धानले बाला झुलेको, बिहानीको शीत । कुहिरो अनि घाम नलाग्ने समय । कसैको घरमा लाहुरे फर्केको परिवेशलाई समातेर घरभन्दा अगाडि देउरालीको ठूलो ढुंगामा बसेर आफूले उक्त गीत लेखेको लोकनाथ बताउँछन् ।
रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी भने गीतमा आफैंले संगीत भरेको दाबी गर्छन् । 'गीतमा मेरै संगीत छ त अरु कसले दाबी गर्न सक्छ र । फिल्मको निर्देशक, निर्माताबीच छलफल गरेर गायक, संगीतकार छान्ने गरिन्छ । खासमा भन्नुपर्दा त त्यो गीतमा शब्द पनि शिव रेग्मी आफैंले लेख्नुभएको हो । लोकनाथले लेखेकै होइन,' अधिकारी भन्छन्, 'पछि गीतमा रचनाकारको नाममा उनको नाम राखिदिएको हो । यो गीत कम्पोज हुँदा फिल्म प्रदर्शन भइसकेपछि दाबी गरेको भए यो गीतमा विवाद छ कि ! भन्ने हुन्थ्यो । तर फिल्म प्रदर्शन भएको १५ वर्षपछि आएर यसरी दाबी गरेर हुन्छ त ?'
१२ मिलियन भ्युज प्राप्त यो गीतबाट आफूले पनि रोयल्टी नपाएको अधिकारीको भनाइ छ । 'रोयल्टीको सवालमा मलाई पनि दु:ख लाग्छ । म आफैंले त्यो गीतको रोयल्टी पाएको छैन । बूढासुब्बा प्रालीसँग रोयल्टी संकलन समाजको मुद्दा चलिरहेको छ । त्यो मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म त्यहाँको रोयल्टी होल्डिङमा छ । त्यसैमा यो गीतको पैसा पनि हुनसक्छ । त्यो गीत बूढासुब्बाबाट नै सार्वजनिक भएको हो,' उनले भने ।
'रोयल्टी संकलन समाजकै अध्यक्ष भएर पनि यो गीतको रोयल्टी पाउन पहल गर्नुभएन ?' भन्ने प्रश्न भुँईमा खस्न नपाउँदै उनले भने, 'पहल नगरेको होइन । पहल नगरेको भए मुद्दा विशेष अदालतसम्म पुग्दैन थियो । फिल्म सम्बन्धी सामग्रीको रोयल्टी नदिने सम्झौता भएको दाबी गर्छ बूढासब्बा । यो गीत फिल्मको भएकाले रोयल्टी नदिने पक्ष लिन्छन् उनीहरु ।'
रोयल्टी संकलन समाज आर्थिक(मेकानिकल) अधिकार बेचिए पनि क्रियटिभ अधिकार अर्थात् रोयल्टीको अधिकार स्रष्टाले पाउनुपर्ने दाबी गर्छ । 'रोयल्टी त हामीले बेचेको हुँदैनौं । त्यसैले यो गीतको रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर उक्त गीत फिल्मको भएकाले रोयल्टी तिर्नुपर्दैन भन्छ बूढासुब्बा,' उनले भने ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १५:३२